Kubata magineti Vagadziri & vanotengesa - China Kubata Magnets Factory
Yero Pilot Ladder Magnet inogadziridzwa kuti iite hupenyu huchengeteke kune vatyairi vegungwa nekupa anodzora anchor anongedzo emanera padivi pechikepe.
Iyi inokwezva yemagineti inogona kubata zvidimbu zvesimbi / simbi kana zvinhu zvesimbi mune zvinwiwa, muhupfu kana pakati pezviyo uye / kana magiranyu, sekukwezva zvinhu zvesimbi kubva mubhavhu remagetsi, kupatsanura madota esimbi, machipisi esimbi uye mafirita esimbi kubva kumatanda.
Round magnetic catcher yakagadzirirwa kukwezva simbi zvikamu kubva kune zvimwe zvinhu. Zviri nyore kuita yepazasi kubata iyo ferrous simbi zvikamu, uye wozokwevera kumusoro mubato kunotora simbi zvikamu.
Iyi rectangular inotora magineti catcher inogona kukwezva zvidimbu zvesimbi nesimbi senge screws, screwdrivers, zvipikiri, uye simbi yakasarudzika kana akapatsanurwa simbi nesimbi zvinhu kubva kune zvimwe zvinhu.